DHAGEYSO: Xaafadda Islii ee Nairobi oo culeyskii laga qafiifiyay, kaddib markii… – HalQaran.com
Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, (Photo by SIMON MAINA/AFP via Getty Images)
Nairobi (Halqaran.com) – Dowladda Kenya oo laba maalmood ka hor ciidan fara badan ku soo daadisay xaafadda Islii ee Magaalada Nairobi ayaa Jimcihii dib uga saartay xaafadaasi.
Ciidamadan ayaa tallaabada loogu soo daadiyay xaafadaasi waxay liddi ku ahayd amarkii ka soo baxay Wasaaradda Caafimaadka Kenya, ee ahaa in shan iyo toban maalmood xaalad karantiil ahi la geliyo xaafadaasi. Sida uu sheegay Wasiirka Caafimaadka Kenya, Mutahi Kagwe waxaa mudadaasi la amray inaanay cidina ka bixi karin xaafadda Islii, cid kalana aanay gudaha u soo geli karin.
Ciidamada Booliska ayaa waxaa Khamiistii la arkayay iyagoo dadka ka hor istaagaya inay guryahooda ka soo baxaan, kuna khasbaya inay dib ugu laabtaan.
Amarka lagu soo rogay xaafadda Islii waxaa uu yimid, ka dib markii Wasaardda Caafimaadka ay sheegtay inay noqotay mid ka mid ah labada goobood ee laga xaqiijiyay xaaladaha ugu badan ee Coronavirus, guud ahaan dalkaasi.
Guddiga Ganacsatada Suuqa Islii ayaa waxay sheegeen in maalintii Jimcaha ay ku guuleysteen in ciidamada dib looga saaro xaafadaasi, ka dib markii ay wadahadalo la yeesheen Masuuliyiinta Dowladda Kenya.
Iskuduwaha Guddiga Ganacsatada Suuqa Islii, Cumar Axmed Nuur, ayaa sheegay inay aqbaleen amarkii dowladda ka soo baxay, ee ahaa inaanan la geli karin, lagana soo bixi karin Islii, balse ay ayaguna dalbadeen in dib loo fasaxo isu socodkii dadka ee xaafadaasi dhexdeeda. Sidaasi daraadeedna ay soo jeediyeen in ciidamada laga saaro halkaasi, taasoo iyana laga aqbalay.
Ugu dambeyn, xaafadda Islii waa xaafadda ay ku badan tahay Soomaalida ballaaran ee ku dhaqan Magaalada Nairobi, waxaana ku yaala mid ka mid ah suuqyada ganacsi ee dalkaasi ugu waaweyn.
Tags: bandhow culus, ganacsiga oo la xiray, qafiifka laga qaaday, Xaafadda islii oo ciidamo lagu soo daadiyay
DHAGEYSO: Taliyihii ciidamada Booliska Dhuusamareeb oo Is-casilay, kaddib markii xubno Shabaab ah la fakiyay